भीम रावललाई ज्यान मार्ने धम्कि दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ! – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः २८ पुष २०७६, सोमबार १८:४४ January 19, 2020
प्राय नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारका हल्ला र फण्डाहरु भइरहन्छन्। चलिरहन्छन्। हरेक महिनामा एक न एक विषयले चर्चाको शिखर चुमेकाे हुन्छ। नयाँ विषयकाे उठान हुन्छ। काण्डै काण्डको देश जस्तै बनेको छ नेपाल। पछिल्लो समय एमसीसी, यति काण्ड सेलाउन नपाउँदै भीम रावल काण्ड चर्चामा आएकाे छ।
रावलले उल्लेख गरेको लेडी डायनाको प्रसंग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले केहीदिनअघि लेखेको फेसबुक स्टाटस हेर्दा यो प्रकरणको तस्बिर प्रष्ट देखिन्छ।
कमरेड, ‘राष्ट्रवाद’को बहसमा बुझेर नै उत्रिनुभएको हो त? पार्टीले तपाईंका कविताबमोजिम चलिदिनुपर्ने कि कसो हो? यी दुई कविताको ‘पुरानो’ र ‘नयाँ कवि’ तपाईं नै हो भन्ने विश्वास नलागेर नै सार्वजनिक खपतका लागि यहाँ दुबै कविता प्रस्तुतसम्म गरिएको जानकारी अनुरोध छ।
म पूरानो लिम्पियाधुरा लेख्ने कविको हिमायती हुँ। तर स्थायी कमिटीमा सुनाएर सार्वजनिक गरिएको कविता भने तथ्यको भ्रष्टीकरण, भ्रमको पुलिन्दा र आत्मनिन्दा एवं भत्सर्नाको मजाकपूर्ण दृष्टान्तबाहेक अरू केही होइन र हुन पनि सक्दैन। तपाईंका यताका अन्तर्वार्ता, प्रस्तुति र यावत पक्षले क्रमश: पापराजीको फन्दामा उहिले डायना परे जस्तो वा आज तपाईं परिरहेको अनुभव भइरहेको छ। यो नबुझेर वा नजानेर त पक्कै गर्नु भएको होइन होला ? एक्लो ‘बृहस्पति’ बन्न नखोज्नु नै हितकर हुन्छ होला?
तपाइको आजको बोली, धारणा र अभिव्यक्ति नेकपाको संस्थागत निर्णय, धारणा र निर्देशन कदापि होइन र मान्न सकिँदैन। कमसेकम आफूले टेकेको धर्ती र आफ्नो टाउकोले खामेको आकाशमात्रै थाम्न खोज्नु उचित होला कि। विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरता बिर्सेर फर्किने ठाउँ नै नराखी आफू अनुकूल अपव्याख्या गरेर बहकिनु उचित होइन। आगे कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्दि।’ तपाईंकै ‘सहप्रवक्ता!’
यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने रावलको भनाइ मन्त्री हुन नपाएको आक्रोश भएको बताएका छन्। मैले उहाँले कविता लेखेको प्रसंगमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको हो। यही विषयलाई लिएर ज्यान मार्ने धम्की आयो भन्नु भएछ।
गृह र रक्षा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति जसले कार्यविधि मिचेर अगाडि-पछाडि सुरक्षाकर्मी लिएर हिँडिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई कसले धम्की दिन्छ होला,’ थापाले भने, ‘बालुवाटारबाट कसैले धम्की दिएको छैन। धम्की दिनु पनि हुँदैन। यो सबै मन्त्री नपाएको रिस पोख्नु भएको हो।’
वेलायती यूवराज्ञी लेडी डायनाको मृत्यु सन् १९९७ अगष्ट ३१ मा कार दुर्घटनाबाट भएको थियो। सो दिन डायनाको पछि लागेका पापाराजीबाट भाग्न खोज्दा पेरिसको पोन्ट एलअल्माको टनेलमा दुर्घटना हुन पुगेको थियो। उक्त दुर्घटनामा डायनाका प्रेमी डोडी फायेद र कारका ड्राइभर हेनरी पलको समेत मृत्यु भएको थियो।